Khurak Online | सुकुल गुण्डा महेश बस्नेतलाई आरोप पुष्टि गर्न चुनौती छ - जेकेन्द्र श्रेष्ठ (जसपा केन्द्रिय सदस्य) - Khurak Online सुकुल गुण्डा महेश बस्नेतलाई आरोप पुष्टि गर्न चुनौती छ - जेकेन्द्र श्रेष्ठ (जसपा केन्द्रिय सदस्य) - Khurak Online
जसपा केन्द्रिय सदस्य जेकेन्द्र श्रेष्ठ र पुर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको ट्विट !
काठमाडौ – जनता समाजबादी पार्टीका केन्द्रिय सदस्य जेकेन्द्र श्रेष्ठले महेश बस्नेत शुकुल गुण्डा भएको बताएका छन । सामाजिक संजालमा बार एक स्टाटस लेख्दै श्रेष्ठले महेश बस्नेत शुकुलगुण्डा भएको आरोप लगाएका हुन ।”सुकुलगुण्डा महेश बस्नेतले प्रम केपी ओली र पूर्व प्रम बाबुराम भट्टराईबीचको भेटलाई सनसनीपूर्ण बनाउन निकै कोसिस गरेका रहेछन् । बस्नेतजी,तपाईँसँग मेरा केही जिज्ञासा छन् ।” भन्दै बार उनले प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका एमाले नेता एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलिका बिश्वास पात्र महेश बस्नेतलाई ३ ओटा गम्भीर प्रश्नहरु सोधेका छन ।
सामाजिक संजाल मार्फत नेता श्रेष्ठले महेश बस्नेतलाई आफुले लगाएको आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिदै भनेका छन ; “यो ठाउँमा सिसिक्यामेराहरू छन् । कसको घरमा को पस्यो र को निस्क्यो भन्ने फुटेजबाट थाहा हु्न्छ । तपाईँले भनेको गलत निस्क्यो भने तपाईँले सार्वजनिक जीवनबाट विश्राम लिने, सही निस्क्यो भने म तपाईँको घरमा आजीवन नोकर बस्छु, हुन्छ काजी ?”
जसपा केन्द्रिय सदस्य जेकेन्द्र श्रेष्ठले सामाजिक संजाल मार्फत सार्वजनिक गरेको प्रश्न यस्तो छ ।
सुकुलगुण्डा महेश बस्नेतले प्रम केपी ओली र पूर्व प्रम बाबुराम भट्टराईबीचको भेटलाई सनसनीपूर्ण बनाउन निकै कोसिस गरेका रहेछन् । बस्नेतजी,तपाईँसँग मेरा केही जिज्ञासा छन् ।
१.हुन त प्रधानमन्त्रीसँग भेट भएको साँझपख रहेछ तर तपाईँले राति १ बजे भन्नुभएछ । एकछिन तपाईँको कुरा नै सही मानौँ । प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न आउनेलाई ‘यतिबेला आउनुस्’ भन्ने गर्छन् कि भेट्न आउने मान्छेले ‘म यतिबेला आउँछु, तपाईँ ठीक परेर बस्नुस्’ भन्छन् ? रातको १ बजे तपाईँको प्रधानमन्त्रीले बाबुराम भट्टराईलाई किन भेट्न बोलाएका रहेछन् ? कि बाबुराम भट्टराई मूलगेटबाट जबरजस्ती छिरेका हुन् ? रातको १ बजे भट्टराईलाई भेट्ने, १२ बजे अर्कोलाई, रातको ३ बजे अरू कसैलाई भेट्ने तपाईँका प्रधानमन्त्री के निशाचर हुन् ?
२.मौजुदा संसदीय अंक गणितमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्ने कुनै आधार नै थिएन/छैन । प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वास गुमाइसकेपछि मूख्य विपक्षी दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा प्राकृतिक हुन्छ भनेरै शेर बहादुर देउवालाई समर्थन गरिएको हो । तर प्रधानमन्त्रीसँग विश्वासको मत पनि नपुग्ने र विपक्षीसँग पनि बहुमत नपुग्ने जस्तो देखिएन । विपक्षी दलका नेताहरूले पहलकदमीको लागि आग्रह गरेपछि राष्ट्रिय संकट समाधान गर्न राष्ट्रिय सरकार गठन गरौँ भन्न प्रधानमन्त्रीलाई भट्टराईले भेटेका हुन् । आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्षलाई आधा-आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने लिखित सहमति त पालना नगर्ने बरु संसद नै भंग गर्ने ओलीले प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छन् भन्ने कसैले सोच्न पनि सक्छन् र ? त्यसमाथि विषयलाई बंग्याउन माहिर तपाईँजस्ता होनहार राष्ट्रिय विभूतिहरू ओलीको वरिपरि छन् भन्ने बुझेर नै सामाजिक संजालमार्फत् वर्तमान र पूर्व प्रम बाहेकको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार गठन गरौँ भनेका हुन् । यसो भन्नु आफ्नो लागि हुन्छ कि देशको लागि ?
३.बोल्दै जाँदा…कसकसका घरमा जसपाका सांसदहरू लुकाएर राखेका छन् भन्ने क्रममा यहाँले हाम्रो निवासमा पनि जसपाका सांसद लुकाएर राखिएका छन् भन्न भ्याउनुभएछ । हे भष्मे ! त्यसपछि मलाई लाग्यो, ‘सत्ताको उन्माद यो जमातमा कतिसम्म रहेछ ! जे गरे पनि हुन्छ, म नै कानुन हुँ, मै हुँ शासक भन्ने कत्रो घमण्ड रहेछ !’
यो ठाउँमा सिसिक्यामेराहरू छन् । कसको घरमा को पस्यो र को निस्क्यो भन्ने फुटेजबाट थाहा हु्न्छ । तपाईँले भनेको गलत निस्क्यो भने तपाईँले सार्वजनिक जीवनबाट विश्राम लिने, सही निस्क्यो भने म तपाईँको घरमा आजीवन नोकर बस्छु, हुन्छ काजी ?